Ultimate hage in ay isticmaalaan Windows 10 desktops badan
Daaqadaha Multiple on desktop-ka waa mid aad u anfacaya xitaa haddii user waa in caado isticmaalka desktop hal sida ay awood multitasking iyo suuqa kala kasta oo waa desktop dhamaystiran laftiisa gudahood jidaynayey isticmaala si aad u hesho inta badan ka soo muuqaalada desktop-ka oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Marka ay timaado in Microsoft markaas Eray ka badan desktop la bilaabay la daaqadaha 8 oo dheeraad ah ayaa la safeeyey marka ay timaado daaqadaha 10 iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in daaqadaha 10 ayaa ikhtiyaarka ugu fiican ee desktops badan doonayay inay ogolaan in dadka isticmaala si aad u hubiso in hawlaha la ah lagu sameeyo ma ay adag tahay oo dhan. On hal dhinac user si fiican u dhagaystaan ​​muusiga dhinaca kale inuu awoodo inuu Internetkana gali si loo hubiyo in magaca artist ah iyo sidoo kale info album la baadhay, halka video song la daawaday. In luqad fudud Eray ka badan desktop oo uu soo gundhig gudahood daaqadaha 10 ogolaan user si loo hubiyo in ugu fiican ayaa loo gudbiyey in user haddii barnaamijyo badan oo la furay iyo waqti isku mid ah user ayaa sidoo kale heli karo ugu soo baxay oo ah urur ka mid ah barnaamijyada aan wax arrintan iyo dhibaato. Tani feature anfacaya sidoo kale muujinaysa, in geynta ee daaqadaha ayaa la siiyay mudnaan sare marka ay timaado siyaasadaha iyo nidaamyada Microsoft ee.
Sidee si ay awood desktop badan daaqadaha 10
Sida loo xakameeyo desktops badan?
Isbarbar dhigga u dhexeeya qaababka cusub badan desktop daaqadaha iyo switcher hawl daaqadaha 8, daaqadaha 7
Waa sahlan tahay in la hubiyo in ay desktops badan la furay oo isticmaalaya daaqadaha 10 iyo qaybtan tutorial ah inuu hubiyo in user helo habka ugu wanaagsan ee looga hadlay habka ugu fiican si uu jiro madmadow kuma hadhin, oo user sidoo kale waa ay awoodaan in ay ka dhigi lahaa la hubiyo in ka dib markii habka la raaco wixii kaloo la sameeyo. Waxaa sidoo kale in la xuso in geeddi-socodka uu soo halkaan looga hadlay waa mid ka mid ah ayaa sidoo kale lagu xusay website-ka rasmiga ah ee Microsoft, sidaas awgeed waa in user u xaqiijiso in uu raacay si ay desktops badan aan firfircoonaan kaliya sameeyo laakiin user sidoo kale helo waayo-aragnimo fiicnayn in arrintan la xiriira. Tallaabooyinka yihiin ee aan laga boodayo si loo hubiyo in wixii kaloo lagu sameeyo fasalka iyo tayada:
1. feature desktop ayaa dalwaddii in la soo gundhig daaqadaha 10 waxaa loo yaqaan aragtida hawsha iyo waxa uu ku yaalaa gudahood ama bar fudayd waxa loo arki karaa sawirka hoose gudahood;
2. dari aragtida desktop a furi doonaa sida ugu dhakhsaha badan user waa inuu xaqiijiyo in aragtida hawsha loo riixi:
3. user ayaa si desktop ku dari kartaa screen la doonayo in la hubiyo in nidaamka halkan dhamaado buuxa:
4. Haddaba haddii user doonayo in la hubiyo in ay desktops badan waxaa lagu muujiyey markaas button hawl virw mar kale waa in la riixi:
Waa la arki karaa in geeddi-socodka waa cadaalad ah oo fudud oo ah in la isticmaalo qaababka kala duwan ee barnaamijka waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in qaybta xigta ee tutorial la akhristay oo waan fahmay in buuxa si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican iyo gobolka shaqeynta tahay gundhig gudahood version cusub ee daaqadaha la bilaabay 29-kii July 2015 on.
Ka dib markii kaakicin badan ee desktops tallaabada xigta waa in la hubiyo in desktops ah waxaa loo isticmaalaa habka ugu fiican si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in talaabooyinka mar kale la raacay sida ay la soo sheegnay si loo hubiyo in tani ay feature laga cabsado waa riyaaqay in buuxa sameeyo. Ka dib markii qaar ka mid ah muuqaalada in la samayn karaa iyadoo la isticmaalayo habkaani, si loo yareeyo habka guud ee style iyo fasalka:
1. U soo guurista Chine ee
Si aad u soo guuraan Dalka Chine ka meel kale waa in la ogaadaa in user a waa in guji desktop-ka, halkaas oo dalabka ku yaal oo markaas waa xaq guji app iyo dooran desktop-ka ka mid ah liiska oo u muuqata:
View 2. Marinka
User waa inay hubiyaan in furaha daaqadaha + tab la isku soo riixayo si aad u bilowdo aragtida strip si loo hubiyo in desktops waxaa si fudud u geli:
3. bedelaan desktops badan
Toobiye ayaa keyboard, waayo, taasu waa furaha Windows + Ctrl + arrow bidix ama fallaadhiina waxay xaq u xidhan dhaqaaqo oo u saamixi doonto user si loo hubiyo in desktop la bedelo sida rabitaan iyo doonistiisa. Haddii kale user sidoo kale hubin karaa in in desktop cusub waxaa u helin si fudud u riixaya badhanka aragtida hawsha:
Shaashada kor ku xusan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday habka in ay xirto desktop ah oo si fudud loo samayn karaa iyada oo la hubiyo in mouse ka dul istaagin waa in ka badan aragtida hawsha muhiimka ah oo fallaadhiina waxay u dhiganta desktop-ka waa inuu kan la xiray ayaa la riixi si loo hubiyo in wixii kaloo yahay sameeyo tayada iyo fasalka.
The qoraalkii hore ee daaqadaha la hubiyo in halkii aragtida hawsha iyo duwan desktops muujinta ah ee switcher hawsha waxaa loo isticmaalaa in la hubiyo in hawsha la mid ah waxaa la sameeyaa. Desktops Multiple yeesheen fikradda waxoogaa dheeraad ah oo ay hubaal tahay wax ku ool ah ay sabab u tahay dhibcood in lagu taxan yihiin hoos:
Switcher Hawsha in Windows 7 iyo 8 adag tahay in la maareeyo oo waqti isku mid ah aysan u ogolaataa user ay u helaan shaqeynayaan feature buuxa ee desktop-ka.
Switcher Hawsha u ogolaataa user ay u isticmaalaan desktop hal halkii badan oo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in ka shaqeynayaan ee desktops badan yahay sare u badan marka loo eego habkaani.
Switcher Hawsha inta badan ku xiran tahay tuuryo keyboard ah halka desktops badan hubiyo in user helo aragtida wanaagsan ee ka shaqeynayaan waxaa kor u sameeyaan.
Ilaalinta qodobada kor ku xusan maanka waa dhalashada in la ogaado in daaqadaha 10 fursadaha desktop badan xaqiiqdii waa loo baahan yahay sare fog badan oo marka la barbar dhigo hawsha switcher oo xaqiiqdii waa technology jir hadda.
5 talooyin update daaqadaha media player
Waxaan ka heli kartaa Windows 10 for free
Play kulan Madaxweyne Siilaanyo Oo on Windows 10 Computer
Sida loo Connect shaqeeyaan iyo Control Android Phone on PC
iPhoto for (Manager Photo PC) 8 Windows
> Resource > Windows hage> Ultimate in ay isticmaalaan Windows 10 desktops badan